Ururka Hindida ee Dalxiisayaasha Dalxiiska hadda meel kasta oo dalka ka mid ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Ururka Hindida ee Dalxiisayaasha Dalxiiska hadda meel kasta oo dalka ka mid ah
Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • Investments • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Ururka Hindida ee Dalxiisayaasha Dalxiiska
IATO waxay laamihiisa ku fidineysaa aagagga Rajasthan, Uttar Pradesh, Sikkim, Andaman iyo Nicobar, iyo Manipur iyo Tripura.
Saldhigga xubinnimada ururka ayaa sidoo kale koray oo gaadhay Uttarakhand, Ladakh, Lakshadweep, Dadra, Nagar Haveli, Daman, iyo Diu.
Qorshayaasha balaadhinta waxay mudo dheer yool u ahaayeen Gudiga Fulinta ee ururka.
Gaaritaanka IATO hadda wuxuu ku egyahay dhammaanba qaybaha dalka juquraafi ahaan.
Guddiga Fulinta ee Ururka Hawl-wadeennada Dalxiiska (IATO) wuxuu dhawaan dib-u-eegay oo dib-u-habeeyay cutubyada gobolka iyo gobolka si loo ballaariyo baalasheeda loona xoojiyo saldhigga xubinnimada ee Uttarakhand, Ladakh, Lakshadweep, Dadra, Nagar Haveli, Daman, iyo Diu.
Sii wadida, IATO waxay sii ballaarisay baalasheeda iyadoo loo magacaabay Co-Chairman iyo mas'uul ka ah dowlado kala duwan iyo dhulalka shaqaalaha.
Rajasthan, iyada oo ah gobolka weyn ee leh xubinimada adag, waxaa loo tixgeliyey inuu leeyahay wada-jir iyo Mr. Mahendra Singh oo ka tirsan Fasaxyada N Vaccations, Jaipur, waxaa loo magacaabay inuu noqdo Co-Guddoomiyaha Rajasthan.
Waxay ahayd muddo dheer gudaha qorshayaasha IATO Guddiga Fulinta inuu yeesho Wada-Guddoomiye Uttar Pradesh oo saldhiggiisu noqon doono Varanasi, iyadoo la tixgelinayo muhiimadda Varanasi oo ah soo jiidasho dalxiis oo weyn dalxiisayaasha caalamiga ah iyo kuwa gudaha, iyo Mr. Bhuvanendra Vikram Singh oo ka tirsan Ra'iisul Wasaaraha Qiimaha Tours Pvt. Ltd. ayaa la siiyay masuuliyadan.
IATO Howlwadeenada Dalxiis